काठमाडौं -प्राय सबैका लागि अहिलेको मूख्य समस्या भनेको कसरी सुन्दर देखिने भन्ने हो । त्यसमा पनि आफ्नो लुक्स र शरीरलाई कसरी अरुको भन्दा आकर्षक बनाउनेतर्फ नै उनीहरुको बढी ध्यान जान्छ । तर पनि कयौंपटक मोटो शरीर र कपडाभन्दा बाहिर निस्किएको पेटले उनीहरुलाई ठूलो समस्यामा पारिदिन्छ ।
आफ्नो शरीर फिट बनाउने चाहना त सबैको हुन्छ । तर केही कारणले गर्दा उनीहरु त्यसमा सफल हुन सक्दैनन् । यदि तपाईपनि यस्तै समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् यहाँ हामीले केही टिप्स दिएका छौं, जसलाई उपयोग गरेर तपाई आफ्नो मोटोपन घाटाउनका साथै शरीरलाई स्लिम बनाउन सकिन्छ ।
यदि तपाई मात्र ७ दिनमा एक आकर्षक फिगर चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि वर्कआउट गर्नु जरुरी छ । नियमित वर्कआउट गर्दा तपाईले छिट्टै नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
वर्कआउटका कारण पेटमा रहेको बोसो छिट्टै पग्लिन्छ । यसका लागि पेटसँग जोडिएका व्यायाम जस्तै पुश–अप, पुल–अप आफ्नो वर्कआउटमा सामेल गर्नुहोस् । यस्तो व्यायामले नियमित रुपमा ५०० देखि ६०० क्यालोरी बर्न गर्न सकिन्छ ।
नुनको प्रयोग कम गर्नुहोस्
खानामा नुनको मात्रा बढी लिने गर्दा हामी उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर), मोटोपना जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुन पुग्छौं । यसकारण खानामा नुनको मात्रा एकदम कम गर्नुहोस् यसले तपाईको मोटोपना मोटोपना घट्ने छ ।
डाइटमा ध्यान दिनुहोस्
यदि तपाई छिट्टै मोटोपनाबाट छुटकरा पाउन चाहनुहुन्छ भने डाइटमा पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । शरीरको तौल घटाउनका लागि हरियो तरकारी, फल, माछा, दुध, दही जस्ता खानेकुरा खानुहोस् । साथै खानामा चिनि र नुनको मात्रा कम गर्नुहोस् ।
तनावबाट टाढा रहनुहोस्
शरीरको तौल घटाउनका लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, तनावबाट टाढा रहनु । तनवका कारण शरीरमा कोर्टिसोल जस्तो हर्मोन सञ्चार हुन्छ । जसले गर्दा शरीरको तौल छिट्टै बढ्न जान्छ । त्यसकारण तनावबाट टाढा रहन आफूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नुहोस् ।
उपराष्ट्रपति पुनद्वारा शपथ ग्रहण
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो – आवश्यक औषधि पर्याप्त छ
सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै औषधि उपकरण पर्याप्त रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधवार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कोरोना भाइ...
कोरोना विरुद्धको २० लाख खोपमा कहाँ भयो गडबडी ? जिन्सी व्यवस्थापकमा खोट
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोकथामका लागि सरकारले खरिद गरेको र दाताले उपलब्ध गराएका लाखौं डोज खोपमा गडबडी भएको विषयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरबाही उजागर गरेको छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्याले कोरोन...
मन्त्रीलाई गुहार्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता, मनोबल गिर्दै
कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । कोरोनाको पहिलो लहरको जोखिम भत्ता पाए पनि दोस्रो लहरको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन् ।&...
कम योग्यलाई टेलिकमको एमडी नियुक्त गर्न चलखेल, व्यक्ति केन्द्रित गरी आवश्यक योग्यता घटाइयो
वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अपिल